ထင်မှတ်မထားပဲ ရခဲ့တဲ့ရင်သွေးလေးကို မိဘတွေက ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုခဲ့လို့ အံ့သြမိတယ်ဆိုတဲ့ စည်ဖြိုး – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ အောက်တိုဘာလ (၂၆)ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ချစ်သူမှာ သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ် ။ လက်မထပ်ရသေးဘဲ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမယ့် စည်ဖြိုးရဲ့ မိဘတွေကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကြည်ဖြူစွာလက်ခံပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီအဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စည်ဖြိုးက သူ့မိဘတွေရဲ့သဘောထားကြီးမှုကို အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်တော် အံ့သြမိတယ်. ကျွန်တော့ဘဝမှာ ကြုံသမျှပြောင်းလဲ ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကို..ဟင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း ဟာ ဒုက္ခပါပဲလို့ ဘယ်တော့မှမငြီးခဲ့တဲ့အတွက် ..မာတာပီတ မိနဲ့ဖ သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်ကို အံ့သြဦးခိုက်မိတယ်..အရွယ်ရောက်လာကြင်သူပါလာတော့လည်း ငါ့သားဟဲ့ငါ့သမီးဟဲ့ဆိုတဲ့ငါအစွဲ သူတော်ကောင်းပါလို့ပြောတဲ့သူတောင်မထိန်းနိုင်ပေမယ့်..သူစိမ်းလည်းသမီးအရင်းပမာ မုဒိတာပွားမေတ္တာထားနိုင်တော့ထပ်ပြီး အံ့သြဦးခိုက်မိပါတယ် လို့ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။
ခုလို ကိုဗစ် ကာလကြီးမှာ မမျှော်လင့်ပဲဝင်လာ သူလေးကို လက်ခုတ်တီး လို့တောင်ကြို ဆိုပေးနေပြန်လို့ ပိုပြီးအံ့သြဦးခိုက်မိပါတယ်လို့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ဟခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါ မိဘနေရာရောက်မှ မိဘမေတ္တာကို အကြိမ်ကြိမ် အံ့သြ ဦးခိုက်နေမိတယ် လို့ မကြာခင် အဖေဖြစ်လာတော့မယ့် ဖခင်လောင်းလေး စည်ဖြိုးက ရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ထငျမှတျမထားပဲ ရခဲ့တဲ့ရငျသှေးလေးကို မိဘတှကေ ဝမျးသာအားရ ကွိုဆိုခဲ့လို့ အံ့သွမိတယျဆိုတဲ့ စညျဖွိုး
ပရိသတျကွီးရေ အောကျတိုဘာလ (၂၆)ရကျနကေ့ သူ့ရဲ့ခဈြသူမှာ သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယျဝနျရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို အသိပေးခဲ့ပါတယျ ။ လကျမထပျရသေးဘဲ ကိုယျဝနျရခဲ့တဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကွေားမှာဝဖေနျမှုတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပမေယျ့ စညျဖွိုးရဲ့ မိဘတှကေတော့ ဒီအဖွဈအပကျြကို ကွညျဖွူစှာလကျခံပေးခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒီအဖွဈပကျြနဲ့ပတျသကျပွီး စညျဖွိုးက သူ့မိဘတှရေဲ့သဘောထားကွီးမှုကို အခုလိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျ ။
ကြှနျတျော အံ့သွမိတယျ. ကြှနျတော့ဘဝမှာ ကွုံသမြှပွောငျးလဲ ဖွဈတညျမှုတိုငျးကို..ဟငျဘယျလိုဖွဈတာလညျး ဟာ ဒုက်ခပါပဲလို့ ဘယျတော့မှမငွီးခဲ့တဲ့အတှကျ ..မာတာပီတ မိနဲ့ဖ သူရဲကောငျးနှဈယောကျကို အံ့သွဦးခိုကျမိတယျ..အရှယျရောကျလာကွငျသူပါလာတော့လညျး ငါ့သားဟဲ့ငါ့သမီးဟဲ့ဆိုတဲ့ငါအစှဲ သူတျောကောငျးပါလို့ပွောတဲ့သူတောငျမထိနျးနိုငျပမေယျ့..သူစိမျးလညျးသမီးအရငျးပမာ မုဒိတာပှားမတ်ေတာထားနိုငျတော့ထပျပွီး အံ့သွဦးခိုကျမိပါတယျ လို့ရေးသားဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ ။
ခုလို ကိုဗဈ ကာလကွီးမှာ မမြှျောလငျ့ပဲဝငျလာ သူလေးကို လကျခုတျတီး လို့တောငျကွို ဆိုပေးနပွေနျလို့ ပိုပွီးအံ့သွဦးခိုကျမိပါတယျလို့ သူ့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေိုဖှငျ့ဟခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ သီတငျးကြှတျခြိနျခါ မိဘနရောရောကျမှ မိဘမတ်ေတာကို အကွိမျကွိမျ အံ့သွ ဦးခိုကျနမေိတယျ လို့ မကွာခငျ အဖဖွေဈလာတော့မယျ့ ဖခငျလောငျးလေး စညျဖွိုးက ရေးသားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ။
(၂၁)ကြိမ် မြောက် သိန်း တစ်သောင်း ကံထူးရှင် ထွက် ပေါ်လာပြီ